Asan-jiolahy : 130 no maty -
AccueilRaharaham-pirenenaAsan-jiolahy : 130 no maty
03/08/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Mbola olana goavana eto amin’ny firenena ny tsy fandriam-pahalemana na dia manao izay tratra ny heriny aza ny mpitandro filaminana. Miparitaka rahateo koa ny fitaovam-piadiana manomboka any amin’ny basim-borona hatrany amin’ny basy mahery vaika toa ny Kalachnikov sy ny P.A…
Iray volana monja
Mahatratra 130 ny isan’ny olona maty mifandraika amin’ny tsy fandriam-pahalemana araka ny tatitra nomen’ny zandarimaria tato anatin’ny iray volana monja. Tafiditra ao anatin’izany ireo mpitandro filaminana avy amin’ny zandarimaria, ireo olon-tsotra ary ireo jiolahy sy dahalo lavo nandritra ny fifandonana, na fanafihana, na fandrobana. Anisan’ny mitana laharana ambony ao anatin’izany tsy fandriam-pahalemana izany ny resaka kidnapping vao avy noresahina teto omaly ka nilazana fa efa maherin’ny arivo Miliara ny vola lasan’ireo jiolahy nanomboka ny taona 1991.
Mitana laharana avo ihany koa ny asan-dahalo izay miisa 188 tao anatin’izay iray volana izay ka nahaverezana omby miisa 6 000. Marihina moa fa noho ny ezaky ny zandarimaria dia tafaverina amin’ny tompony ny omby miisa 3 000 ka dahalo manodidina ny 145 no efa voasambotra sy natolotra ny Fitsarana. Miisa 165 kosa ny raharaha maizina sy asan-dahalo tsotra nitranga teny anivon’ny tontolo ambanivohitra raha kidnapping miisa sivy kosa no niseho tany Malaimbandy sy Tsaratanàna. Momba izay kidnapping izay ihany, olona 16 no efa sarona, ezaka niarahana tamin’ny polisim-pirenena.
Tsy mitazam-potsiny eo anatrehan’izany anefa ny zandarimaria, ary efa eo am-panatanterahana hetsika manokana amina faritra sivy any amin’iny tapany Atsimon’ny Nosy iny. Zandary miisa 350 no hanampy isa ireo efa any an-toerana. Mafana amin’ny resaka asan-dahalo tokoa mantsy iny faritra Atsimo iny raha tsy hiresaka afa-tsy ny fanafihana niharo halatra omby anjatony tao Mahaboboka, distrikan’i Sakaraha, nahafatesana olona iray ny alatsinainy lasa teo. Miantefa any amin’ny fanatanterahana ny fifidianana hatrany moa ny saina rehefa miresaka ity tsy fandriam-pahalemana ity. Inoana anefa fa tsy hisy vokany izao hetsika manokana noraisin’ny zandarimariam-pirenena izao.